सम्भोग गर्दा कसरी पाउने उच्चतम सन्तुष्टी ? - Gokarna News
सम्भोग गर्दा कसरी पाउने उच्चतम सन्तुष्टी ?
एजेन्सी– यौन मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो । स्वास्थ्यविद्हरुले स्वस्थ जीवनका लागि यौनसम्वन्ध अर्थात् सम्भोगलाई पनि महत्वपूर्ण मान्ने गर्छन् ।
यौनजीवनमा सन्तुष्ट नभएका मानिसहरुको दाम्पत्य सम्वन्ध नै असफल भएका कैयन उदाहरण छन् । विभिन्न कारणले यौन वा शारिरिक सम्पर्कका बेला समस्या निम्तने गर्छन् । यसले सन्तुष्टीमा असर पुर्‍याउँछ । गम्भीर सम्भोगका लागि पुरुष–महिला दुबैको शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ ।
बोसोजन्य, दुधजन्य पदार्थ, जंक फुडजस्ता खाद्यपदार्थको उपभोगलाई घटाउनुपर्छ । किनकी यस्ता खाद्यपदार्थमा एन्टिअक्सिडेन्टको मात्रा कम हुन्छ जसले मुटुको धमनीहरुलाई साँघुरो बनाउँदै लैजान्छ र प्रजनन अंगको रक्तसञ्चारमा बाधा उत्पन्न गर्छ । साउथ कोरिया विश्वविद्यालयले ३ हजार २ सय ५० पुरुषहरुमा गरेको अनुसन्धानबाट कोलस्ट्रोलको मात्रा बढेका पुरुषहरुलाई यौन समस्या हुने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैले खानामा बोसो, चिल्लोलाई कम गरी सलादको प्रयोग बढाउनुपर्छ ।
विश्वकै सबैभन्दा धनी बिरालोको मृत्यु
सेक्सका नयाँ तरिका, यस्ता छन् टिप्स